नेपाल आज | कांग्रेसका नेताहरुले ‘डेढ वर्षमै सरकार ढालिदिन्छौं’ भन्न थालिसके (भिडियोसहित)
कांग्रेसका नेताहरुले ‘डेढ वर्षमै सरकार ढालिदिन्छौं’ भन्न थालिसके (भिडियोसहित)
काठमाडौं । प्रा.डा. सुरेन्द्र केसी तर्क र तथ्यले विशेषतः राजनीतिक दल र नेताहरुलाई ‘लोहार चोट’ दिन कुशल छन् । डा. केसीले नेपालका कम्युनिष्टहरुबारे त गहिरो अध्ययन गरेका छन् । नेपालमा कम्युनिष्ट नाम गरेका जति पनि राजनीतिक दल छन् ति कसैलाई डा. केसी कम्युनिष्ट मान्दैनन् । यो कुरा उनले नेपालका कम्युनिष्ट नेताहरुलाई प्रत्यक्ष नै भनिदिने गर्छन् ।
प्रतिनिधिसभा/प्रदेश सभा निर्वाचन २०७४ मा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको गठबन्धन स्पष्ट बहुमततर्फ अग्रसर भएपछि नेपाली कांग्रेसका नेताहरुमा विचलन आउन थालेको संकेत डा. केसीले गरे । नेपाल आज डटकममा डा. केसीको नियमित भिडियो स्तम्भ ‘इतिहास र अनुभूति’ छ । यो स्तम्भको पछिल्लो श्रृंखलामा डा. केसीले भने, ‘कांग्रेसका चन्द्र भण्डारीले कम्युनिष्ट सरकार डेढ वर्षमै ढालिदिन्छौं भनेको सुनियो । यो सुखद होइन । ’
विपक्षीको कुरा मात्रै होइन एमाले माओवादीबीचमै अब खटपट हुनेवाला छ । अहिले नै सरकार पहिले कि एकता पहिले भन्ने विषय उब्जेको छ । आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न ठूला नेताहरुले आफ्ना ‘यसम्यान’ हरुलाई विभिन्न कुराहरु बोल्न लगाउँछन् । त्यस्तै विषय प्राथमिकताका कुरा हुन् भन्ने स्थापित गराउँछन् । र स्वार्थको रोटी सेक्ने गर्छन् भन्ने डा. केसीको तर्क छ ।
केसी भन्छन्, ‘हामीले कसम नै खाए झै यी नेताहरुको आलोचना गर्नुपर्ने विषय पनि केही छैन । जसरी नसोचेको गठबन्धन भयो । उनीहरुले चुनावमा सफलता पनि पाए । ठिक त्यसै गरी सत्ता व्यवस्थापन गरे, किचलो हटाए । मिलेर आर्थिक समृद्धितर्फ अगाडि बढे भने राम्रो हुन्छ । नेताहरुको स्वार्थले भरिएको पुरानो बानीबाट जनता झस्केका मात्रै हुन् ।’
नेपाली राजनीतिमा नेतृत्व व्यवस्थाप ठूलो चुनौतीको कुरा हो । यो इतिहासदेखि नै छ । नेपाली कांग्रेस बन्नु अघि राष्ट्रिय कांग्रेसकै बेलादेखि नेतृत्व व्यवस्थापनमा किचलो आएको छ । त्यस्तो विषय कम्युनिष्टहरुमा पनि भयो । अहिले पनि डेढ दर्जन बामपन्थी दल छन् । यति धेरै विभाजनको मूल कारण पद नै हो । सधै तुष, महत्वाकांक्ष, विदेशी स्वार्थले टुक्रेका छन् । यो प्रवृत्ति अहिले पनि सकिएको छैन । राप्रपा त टुक्रेर सकियो । – डा. केसीले भने ।
विवेकशील साझाको पराजयलाई केसीले भने, ‘त्यो पार्टीका नेताहरुले राजनीतिक चरित्र देखाएको भए राष्ट्रिय पार्टी बन्ने रहेछ । बन्न लागेको नयाँ विकल्प बनेन । दुःख लाग्यो । यसबारे यत्ति भन्छु ।’
डा. केसीले नेपाली कांग्रेसको पराजयको पहिलो कारण मानेका छन्, ‘आरजु देउवाको अनावश्यक हस्तक्षेप र चुरीफुरी हो । ’ बाँकी कारण उनले यसरी औल्याएः
२. शेरबहादुर देउवाको अकर्मण्य नेतृत्व
३. बामहरुको गठबन्धन
४. कांग्रेसको अनावश्यक प्रशासनिक हस्तक्षेप
५.नेपाल प्रहरी प्रमुख काण्ड
६.प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाभियोग
७. अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीको सवालमा कांग्रेसको चरित्र
८.भारतीय नाकाबन्दीमा कांग्रेसको मौनता
९.केपी ओलीको अविचलित र राष्ट्रिय आकांक्षाअनुरुपको भूमिका
अहिले भारतका मिडियाहरुले मोदीको असफलताको रुपमा नेपालका वामपन्थीहरुको विजय हो भनेर चित्रण गरिरहेका छन् । भारतको गुजरातमा भइरहेको निर्वाचनमा पनि यसले प्रभाव पार्ने बताउने गरिन्छ । मोदीको नेपाल नीति गलत भएको टिप्पणी त्यहाँ भइरहेको छ ।
डा. केसी भन्छन्, ‘पहिले मोदीले कांग्रेस आइको नेपाल नीति गलत भनेका थिए । तर अहिले मोदीकै आलोचना भारतमा भइरहेको छ ।’